आफूलाई मन्त्रीभन्दा ‘माथि’ ठान्ने अचम्मका प्रेस सल्लाहकार ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more आफूलाई मन्त्रीभन्दा ‘माथि’ ठान्ने अचम्मका प्रेस सल्लाहकार !
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफूलाई जानकारी नै नभएको विषयमा सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई नियमित डायलासिसका लागि कहाँ लगिएको हो ? त्यो नै थाहा नहुने सल्लाहकारले बुधवार मात्रै सागमा पदक पाएका खेलाडीहरूले पाउने पुरस्कार रकमका बारेमा गलत सूचना दिएका थिए । संविधानले नचिन्ने सल्लाहकारले मन्त्रीले तयार पारेको प्रस्तावलाई नै गलत तरिकालेसञ्चारमाध्यमलाई ब्रीफिङ गरेपछि उनको भूमिकालाई लिएर बहस सिर्जना भएको छ ।
मंसिर २६ गते, २०७६ - १२:५२ मा प्रकाशित